एनएमबी लघुवित्तले सुरु गर्यो क्रेडिट एक्स नामक ऋण अटोमेसन प्रणाली « Bizkhabar Online
एनएमबी लघुवित्तले सुरु गर्यो क्रेडिट एक्स नामक ऋण अटोमेसन प्रणाली
25 June, 2021 11:41 am
काठमाडौं । एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले एस्. बी सोलुसन्स् प्रालिसँग सहकार्य गरेर क्रेडिट एक्स नामक ऋण अटोमेसन प्रणालीलाई लाइभ गरेको छ । यसले इन्टर्नल ऋण वर्कफ्लो, जोखिम मूल्याकंन, ऋण स्वीकृतिलाई स्वायत्त र डिजिटाइज गर्ने गर्दछ । एन्एम्बी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द पान्डे र एस्.बी. सोलुसन्स्का अध्यक्ष विपुल ढकालले आ–आफ्नो संस्थाको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
क्रेडिट–एक्स (ऋण अटोमेसन प्रणाली) को थालनी सँगै, लघुवित्त संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कागज निर्भर ऋण कार्यप्रवाह गर्न सक्षम हुने जनाएको छ । यसले प्रणाली भित्र जोखिम प्यारामिटरहरूको अनुगमन गरेर ऋण लिएका ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।
यो नयाँ तरिकाले लघुवित्त संस्थालाई द्रुत गतिमा ऋण प्रक्रिया पूरा गर्न मद्दत गर्दछ । प्रणालीले जमानत र गैर जमानत बेस लोन पनि प्रोसेस गर्ने जनाएको छ । ऋण स्वचालन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत रहेको रेटिंगको दृष्टिकोणमा निर्माण गरिएको छ । यो स्वायत्त सिस्टम, प्रणालीले संचालित ग्राहकको उद्देश्य मूल्याङ्कनका साथसाथै विषयगत प्यारामिटरहरूको मानकीकरणको रुपमा पनि रहेको जनाएको छ ।
यस नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएसाथै, लघुवित्त संस्थाहरूका उपभोक्ताहरूले प्रशोधन र ऋण स्वीकृति प्रक्रियाको टर्न अराउन्ड समयमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कटौतीको अनुमानित लाभ लिन पाउनेछन् । एन्एम्बी लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हो ।
एन्एम्बी ललघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगभग २ लाख भन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् र देशभरि ११० भन्दा बढी शाखाहरु रहेका छन् । एस्.बी. सोलुसन्स्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा पक्रियालाई अटोमेसन तथा डिजिटाइजेसन गर्न क्रेडिट– एक्स नामक सफ्टवेयर जडान तथा इम्पिलीमेन्टेसन गर्दै आईरहेको छ ।
साथै एस्.बी.सोलुसन्स् प्रालिले डिजिहब सँगको सहकार्यमा पेमेन्ट अटोमेसन, एपीआइ सर्भिसेस अटोमेसन तथा डिजिटाइजेसनको कामहरु पनि गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाले कुल लगानीको ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तद्धारा करिब ९० लाख ब्याज छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणी सदस्यहरुलाई करिब ९० लाख बराबरको ब्याज
माईक्रोफाइनान्सको नाफामा राष्ट्र बैंकको कसी, त्रैमासिक सेवा शुल्क ०.३७ प्रतिशतभन्दा लिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको नाफामा कसी लगाएको छ । माईक्रोफाइनान्सले पछिल्लो समय सेवा
लघुवित्तको संख्या घटाउँदै राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तको क्रस होल्डिङ भएकालाई १ बर्षभित्रै मर्जरमा लगिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रसम होल्डिङ भएका घलुुवित्त कम्पनीहरुलाई १ बर्षभित्रै मर्जरमा लैजानु पर्ने